▷ 2022 Saliid Lidl Free Fryers | Fikradaha, Qiimaha iyo Beddelka
Shiilan saliid la'aan ah ayaa caan ku ahaa dhowr sano iyo Lidl supermarket Waxay qaadatay fursadda inay soo saarto dhowr nooc oo suuqa ah xilliyada qaar.
Mifreidorasinaceite waxaan raacnay horumarkooda iyo waxaan falanqeyneynaa faa'iidooyinka iyo khasaaraha qalab kasta.
Intaa waxaa dheer, sida caadiga ah in ay si dhakhso ah u iibiyaan, waxaanu soo jeedinaynaa la mid ah ama xitaa isku door ah noocyada kale si aad u hesho kaaga.
➤ Lidl 2022 Saliid Fryer bilaash ah
Dhawaan astaanta ayaa la sii daayay moodelkeedii ugu dambeeyay, in aad awoodid ka iibsato khadka tooska ah laakiin waa la iibin jiray maalmihii ugu horreeyay. Hoos waxaan ku tusinaynaa sifooyinka model this waxaan kuu soo jeedinaynaa Beddelku waa isku mid:
Laga heli karo Online
【Saliid yar iyo macaan】 - Marka loo eego karinta shiilan qoto dheer oo joogto ah, foornada isku dhafka ah waxay isticmaashaa tignoolajiyada cusub taas oo ka dhigaysa in kulaylku si dhakhso ah u wareego iyada oo ay uga mahadcelinayaan taageeraha gudaha. 360 ° hawo kulul oo wareeg ah ayaa loo abuuraa karinta (dhawaaqa shaqaynaya ee ka yar 65 dB). Waxay ka dhigi kartaa shiilan Faransiiska mid qallafsan iyo digaaga casiir leh, isla mar ahaantaana hoos u dhigaya mugga saliidda 80%.
【10 in 1 Machine】 - Innsky IS-AF002 kaliya maaha foornada shiilan ee aan saliidda lahayn, laakiin sidoo kale dubay, fuuq-baxa miraha, foornada pizza iyo foornada. Iyada oo heerkul ballaadhan oo u dhexeeya 80 ℃ ilaa 200 ℃, waxaad ku duban kartaa, dubi kartaa, ku duban kartaa oo fuuqbaxi kartaa mashiinkan. Awooda dheeraadka ah ee 10-litir ee 2-koorsada shiilaynta hawada waxay diyaarin kartaa cuntooyin dufan yar oo macaan oo loogu talagalay xubno badan oo qoyska ah.
【 fududahay in la isticmaalo oo nabdoon】 - Taabo astaanta si aad si fudud u doorato habka karinta oo u diyaari saxanka aad jeceshahay. Habka wareegtada cusubi waxa uu beddeshaa cuntada si ay cuntadu u kululaato si siman iyada oo aan gacanta lagu ruxin. Iftiinka shaqada waxaad ku iftiimin kartaa gudaha foornada oo aad hubisaa heerka diyaargarowga cuntada. Si kasta oo aanad u aqoon karinta, waxaad samayn kartaa digaag duban oo casiir leh iyo hilib duban oo macaan, iwm.
【Balaadhi fursadaha cunto karinta: oo leh 6 qalab oo dheeri ah】 - 2 saxan oo fuuq-baxa ah iyo cunto karinta marxalado badan, 6 skewers oo duban ah, 1 dambiil durbaan ah oo shiilan, 1 digaag digaag rotisserie, 1 saxan dhibco ah iyo 1 fargeeto dubista. Qalabkan waxaad ku karin kartaa doorashooyin badan. Taas oo la macno ah in aad isticmaali karto cuntada lagu daray si aad u samayso noocyo badan oo macaan.
【Ka takhalus shaqada guriga ee caajiska ah】 - Cunto karintu waa dhakhso oo iyada oo aan lagu rushaynin uumiga saliidda dhammaan miiska jikada. Albaabka qaboojiyaha waa laga saari karaa, dhammaan qaybaha la saari karo waxaa lagu ridi karaa weelka weelka oo lagu qallajin karaa hawo kulul ka dib nadiifinta. Tani waxay ka dhigaysaa ciyaarta caajiska badan ee ilmaha!
Haddii aad rabto in aad ogaato wax walba oo ku saabsan iyada, in our Dib u eegista shiilay saliid-free Innsky Waxaan kuu sheegaynaa wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato.
▷ Tilmaamaha Lidl Fryer oo aan saliid lahayn 2022
Aynu eegno waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee la soo bandhigay, oo lagu qiimeeyay € 99.
Awoodda iyo Agabka
Naqshadu way ka duwan tahay waxa caadiga ah ee noocaan oo kale ah, oo badanaa leh khaanad ama dabool sare, oo la mid ah foornada miiska yar oo leh albaabkiisa hufan.
Wadarta guud ee awoodda gudaha ayaa gaareysa 10 litir waxayna ku siinaysaa fursado badan agabka ay keento: Saxarada caadiga ah iyo grid, kiis dambiisha rotary ee baradhada ama wax la mid ah, rotisserie luqluqa hilibka waaweyn sida digaagga iyo a set kebab oo leh 8 xabo oo yaryar.
Waa nidaam ka dhasha badan oo la taaban karo marka loo eego kuwa khaanadaha ama kuwa rogroga leh ee daboolka sare leh maadaama ay u oggolaanayso nooc kasta oo cunto ah in si ku filan loo kariyo.
awoodda 1800 watt
Its awood 1800 watts sidoo kale ka fiican qalabka kale, inkastoo saamiga awoodda / watt uu la mid yahay moodooyinka kale.
Iska caabintu waxay ku taal qaybta sare waxayna isticmaashaa a taageere convection si loo qaybiyo kulaylka gudaha. Si kastaba ha ahaatee, saxarada aagga sare waxay heli doonaan kulayl badan iyo iska caabin hoose ma dhaawici doonto, sida noocyada kale.
Isku darka shiilan, taageere iyo qalabyo kala duwan ayaa ogolaanaya fursado badan, laga bilaabo dubitaanka, fuuq-baxa, dubitaanka, shiilan, kulaylka, iwm ... marka waxaa la odhan karaa waa 9 kii 1.
Fryerku wuxuu ku daraa kontorool dhijitaal ah oo dhamaystiran oo leh muraayad taabashada hogaanka taas oo kuu ogolaanaysa inaad doorato ilaa 10 barnaamij oo hore loo duubay ama ku hagaaji wakhtiga iyo heerkulka sida aan jecelnahay. Waxa kale oo ay leedahay badhan si ay u dhaqaajiso nidaamka leexinta, maadaama aanay daruuri ahayn haddii aad kaliya isticmaasho saxarada.
Shaashadda hogaanka ah waxay bixisaa macluumaad ku saabsan heerkulka iyo waqtiga la qorsheeyay for our recipe. Hawlgalku waa sahlan yahay wuxuuna bixiyaa wax kasta oo aad u baahan tahay si wax walba loo xakameeyo.
Qalabku waxa uu leeyahay cabbiro dibadda ah oo ku dhawaad ​​33,6 inji sare ah 33,6 inji oo ballac ah iyo 36,9 inji ah oo qoto dheer. Banaanka ayaa ah PVC ku dhammaatay madaw oo dhammaantiis miisaankeedu waa ku dhawaad ​​3,5 kiilo.
Moodooyinka Iibinta ugu Fiican ee Amazon
Goorma ayaa la iibsanayaa shiilan-la'aanta saliidda Lidl?
Way adag tahay in jawaabta su'aashan loo helo maadaama Lidl aanu si joogto ah u iibin shiilantiisa iyada oo aan saliid lahayn, markaa sida keliya ee lagu samayn karaa waa in isha lagu hayo xayeysiisyada telefishannada iyo buug-yaraha dalabyada ee uu soo bandhigo bil kasta.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa in haddii aad hesho wax-soo-saarka, aad tagto Lidl waxa ugu horreeya subaxda maadaama ay tahay badeecad inta badan leh qaybo yar oo iib ah waxayna si dhakhso ah u iibsadaan, markaa iibsashada Lidl Silvercrest fryer ma aha hawl fudud.
Si kastaba ha ahaatee, waxaan horay u soo sheegnay inay jiraan waxyaabo kale oo haddii aadan rabin inaad sugto, midka aan hoos ku dhignay waa ikhtiyaar aad isku mid ah marka loo eego sifooyinka iyo qiimaha labadaba:
➤ Lidl 2018 Saliid Fryer bilaash ah
Sannadkii 2018 Lidl wuxuu sii waday inuu sharad ku sameeyo shiilan oo leh tignoolajiyada hawada kulul, wuxuuna sidaas ku sameeyay qaab cusub oo si weyn u wanaajiyay astaamaha kuwii ka horreeyay, laakiin sidoo kale wuxuu kordhiyey qiimaha ilaa boqol euro. Aynu aragno sifooyinka qalabka la sheegay.
▷ Silvercrest SHFR 1450 A1 Fryer oo wareeg ah
Qalabkan cusub wax yar ama wax shaqo ah kuma laha dukaanka ugu horreeya ee shiilan ee caafimaad qaba, labadaba qaabaynta iyo waxqabadka:
Qiimaha: Qiimaha modelkan lagu iibiyo dukaamada waaweyn ee Isbaanishka waa 99 euro.
Naqshad: Shiilan qoto dheer ayaa lagu heli karaa caddaan waxaana loogu talagalay dabool sare oo galaas ah oo muujinaya cuntada. Cabbirku waa mid cufan, oo miisaankiisu yahay 4,37 kilo, cabbirkuna waa 31x25x48 sentimitir.
Awoodda: SHFR 1450 A1 waxa uu awoodaa 2,5 litir, kaas oo ku filnaan doona ku dhawaad ​​4 xabbo.
Potencia: Awoodda ugu badan ee uu bixiyo qaabkani waa 1450 watts waxaanan nidaamin karnaa heerkulka u dhexeeya 60 iyo 240 degrees Celsius.
NadiifintaShiileeyaha wuxuu la socdaa meesha laga saari karo, weel-dhaqidda-nabdoon walxo aan dhejis ahayn.
Tilmaamo gaar ah: Fryer-kani waxa uu leeyahay suuf wareeg ah oo si toos ah uga saaraya cuntada, suurtogalnimada in lagu kariyo laba heer, koontaroolka dhijitaalka ah ee muraayadda LCD iyo 5 barnaamij oo horay loo diyaariyey iyo saacad ilaa 60 daqiiqo oo toos ah.
Qalabka lagu daro: Marka lagu daro shiilan qoto dheer, lidl waxaa ka mid ah raakishka dhererka labanlaaban, trivet, gacanta la gooyn karo, qaaddo saliidda, buug-gacmeedka Isbaanishka iyo buug-cunto.
▷ Video Fryer caafimaad qaba 2018
➤ Silvercrest Saliid Fryer bilaash ah 2017
Sannadkii 2017 Lidl wuxuu soo bandhigay moodka khaanadaha summada silvercrest 69,90 yuuro, taasoo hoos u dhigaysa qiimaha noocyada ugu fiican. Markii qalabkani uu noqday mid caan ah, noocyo badan oo kale oo qiimo la mid ah ayaa soo baxay, sida Aiok Oil-Free Fryer, kaas oo ah xarun weyn ama kuwa guriga Princess.
Beddelka Qaabka 2017
▷ Astaamaha Muuqda ee Silvercrest Deep Fryer
NaqshadFryer-ka Silvercrest waxaa lagu heli karaa caddaan oo leh faahfaahin madow. Waxaa lagu nashqadeeyay nidaamka khaanadaha, oo ku badan qalabkan, oo leh dambiisha la saari karo oo leh gacan qabasho qabow. Sidan ayaan cuntada uga saari karnaa isla marka ay dhammayso karinta, oo markaa u adeegno kulayl.
AwooddaSummada Silvercrest waxay caddaynaysaa in Fryer-keeda Kulul uu leeyahay qiyaas qiyaas ah 2,3 Litir. Hubaal markaad tan akhrinayso inaad sidiiyada oo kale ah, adigoon garanayn sababta ay u dhowdahay ama inta cunto ee aad kari karto? Hubaal inaad door bidayso inaad ogaato ku dhawaad ​​inta casho ee loogu talagalay. Waa hagaag, cabbirka qaabkani mabda'a maaha mid ku habboon qoysaska, tan iyo markii aad ku dhex diyaarin karto qadarka caadiga ah ee cuntada laba qof.
Potencia: Fryer-ka saliidda lahayn ee Lidl wuxuu ku qalabaysan yahay iska caabin ah 1650W Grill. Awooddani waa inay ku filnaataa natiijooyin wanaagsan, haddii wareegga hawada kulul si fiican loo qaabeeyey. Awoodda iska caabbinta waxaa lagu hagaajin karaa rabitaankayada inta u dhaxaysa 80 iyo 200 darajo Celsius iyadoo la adeegsanayo kulaylka analogga ah.
Nadiifinta: Fryers-yada kulul waxay faa'iido u leeyihiin inay ka nadiifsan yihiin moodooyinka caadiga ah, maadaama aysan keenin ur badan ama dillaac. Ku karinta saliid yar waxay sidoo kale ka hortagtaa in qalabka si wasakh ah u wajaho. Marka lagu daro faa'iidooyinka nidaamkan, qaabka silvercrest wuxuu ku habboon yahay in lagu dhaqo mashiinka weelka. Tani waa faa'iido weyn, maadaama ay na badbaadiso waqtiga iyo shaqada marka la karinayo.
TemperaturaSi loo fududeeyo isticmaalka iyo inaadan u baahnayn inaad ka warqabto shiilayaha, waxay ku daraysaa saacad 30-daqiiqo ah oo si toos ah u xiran.
AdeegsadaLidl wuxuu leeyahay waa shiilan qoto dheer oo hawl badan, sababtoo ah cuntooyin kala duwan ayaa la karin karaa. Iyadoo ay tani caadi u tahay shiilan-la'aanta saliidda, calaamaddu waxay magacawday dhowr buug-yar oo qoraal ah: Baradhadu, Faraha kalluunka, Muufin, Hilib, Nuggets, Digaag
Fikradeena, supermarket-kii ugu horeeyay ee shiilan saliid la'aan ah wuxuu ahaa qalab aad u fiican qiimaha lacagta. Waxay lahayd sifooyinka ugu yar ee qaawan iyo qiimo la awoodi karo.
Qaabka 2018 wuxuu hagaajiyay waxqabadkiisa, laakiin qiimaha ayaa sidoo kale si aad ah u kordhay waxaana jira fursado ka jaban suuqa, sida aad ku arki karto boggayaga. Si kastaba ha ahaatee, hagaajinta ayaa ah mid aad u xiiso badan waxayna wali noo muuqataa qalab leh qiimo wanaagsan lacag.
Nooca 2020 horumarku wuxuu ahaa mid la taaban karo oo qalabku shaqo kuma laha dalabyadii hore ee dukaanka weyn. Inkasta oo weli lagu iibiyo magaca fryer, shaki kuma jiro in ay aad uga badan tahay taas iyo sidii aan horayba u soo sheegnay waxay u egtahay mid aad u dhammaystiran foornada miiska yar ee miiska. Sida caadiga ah ee silsiladda Jarmalka, alaabtu waxay leedahay qiimo wanaagsan oo lacag ah iyo caddaynta tani waa sida ugu dhakhsaha badan ee loo iibiyo.
▷ 3 sano oo dammaanad ah
Dammaanadda qasabka ah ee Spain ee alaabada cusub waa laba sano, si kastaba ha ahaatee Fryer-ka Saliid-la'aanta ah ee Lidl wuxuu bixiyaa hal sano oo dheeraad ah. Sidaa darteed waxaad ku raaxaysan doontaa saddex sano guud ahaan, dheeraad ah oo aad u wanaagsan.
▷ Faa'iido darrooyinka Air Fryer Lidl supermarket
Inkasta oo guud ahaan ay tahay qalab leh tilmaamo wanaagsan, waxaa jira qaar ka mid ah faa'iido darrooyinka sida caadiga ah u muuqda marka la iibsanayo qalabkan oo kale ee silsiladda supermarket-ka:
Helitaanka hooseeya iyo in aan iib ahayn sanadka oo dhan
Caadiyan ma iibiyaan qaybo dheeri ah oo lagamamaarmaan u noqon kara haddii mid ka mid ah agabka uu dhaawacmo.
Haddii aad doorbidayso moodooyinka leh qaybo ka mid ah qalabka iyo xitaa adeegga farsamada ee dayactirka, waxaan kugula talineynaa inaad doorato noocyada sida Philips hawada shiilan o tefal.
(Codadka: 132 Celcelis: 3.2)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Silvercrest Lidl
28 comments on "Fryer Saliida Lidl Free"
14 / 04 / 2018 at 20: 42
Oo halkee lagu barbar dhigayaa Cecotec's Turbo Cecofry 4D? Xitaa moodelkii hore...
14 / 04 / 2018 at 21: 00
Hello. Kama muuqato isbarbardhigga sababtoo ah ma ahayn isku heer markii ugu horeysay ee lidl fryer. Xaqiiqdu waxay tahay in qaabka sanadkan, la barbar dhigi karo, sababtoo ah waxay ku jiraan qiimo isku mid ah, cecotec xoogaa qaali ah. Waxay yihiin moodooyin isku mid ah, inkastoo faahfaahinta qaar ay isbedelaan. Weli ma aannu falanqeyn noocyo badan, oo ay ku jiraan Turbo Cecofry 4D…. 🙂
29 / 08 / 2019 at 17: 51
Waxaan sugayaa dhammaan 2019 si aan u arko haddii ay mar kale soo baxdo. Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay mar kale iibin doonto si aan u sugo ama haddii aysan iibsan nooc kale
31 / 08 / 2019 at 10: 19
Hello Mayte, ma hayno macluumaadkaas. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la tixgelinayo in ay jiraan sahay badan oo ka mid ah noocyada kale ee leh qiimaha la midka ah ama ka hooseeya, maaha mid mudan in la sugo. Boggayaga internetka waxaad ku arki kartaa moodooyinka xiisaha leh sida amiiradda, cecotec, aicok iyo qaar kale oo badan. Salaamu calaykum
12 / 08 / 2020 at 09: 27
Saxanka aan jeclahay waa la shiilay
12 / 08 / 2020 at 11: 41
15 / 05 / 2020 at 10: 17
Dambiilaha shiilan wuxuu socday kaliya wakhti yar ka hor inta aan dhammaan nasashada la qaadin. Halkee ka heli kartaa beddelka?
26 / 05 / 2020 at 09: 05
Markaad ka timid Lidl waa inaad la hadashaa iyaga. Nasiib
03 / 06 / 2020 at 22: 47
Waxaan jeclaan lahaa inaan u soo iibiyo qalabyada Fryer Silver Crest, si aan u qabto hawlo kale, suurtagal ma tahay?
05 / 06 / 2020 at 21: 37
Hi Rafa. Waa inaad ku waydiisaa dukaanka weyn. Xaaladda ugu xun, kuwa ka socda noocyada kale ayaa laga yaabaa inay kuu shaqeeyaan. Waxay kuxirantahay nooca aad haysato, laakiin 2018-ka leh majarafad ayaa laga yaabaa inay ku habboonaato kuwa cecotec ah. salaan
26 / 07 / 2020 at 16: 17
Aniga ahaan cuntada ugu fiican waa "baalasha shiilan" !!
27 / 07 / 2020 at 10: 34
Hello Laura, haddii ay tahay ka qayb qaadashada raffle, faallooyinka halkan ma joogo. Si sax ah u raac tillaabooyinka si aad u gasho bogga ay tahay inaad faallo ka bixiso. salaan
30 / 07 / 2020 at 22: 41
Hello baalasha digaag la shiilay, sida macaan
31 / 07 / 2020 at 10: 57
Hello Maria, faallada waa in ay ahaataa bogga aad gasho iyada oo la raacayo tillaabooyinka deeq-bixinta.
Lucas Red White
31 / 07 / 2020 at 23: 49
Wuxuu sameeyaa digaag duban oo cajiib ah
02 / 08 / 2020 at 11: 55
Waxaan rabaa in aan ogaado haddii weelasha dhalooyinka adag ee lagu isticmaalo foornooyinka caadiga ah loo isticmaali karo Qalinka Silver Crest 9-in-1 Fryer-ka Saliid la'aanta ah.
04 / 08 / 2020 at 11: 06
Hi, waa inaadan wax dhibaato ah kala kulmin iyaga.
11 / 08 / 2020 at 12: 20
Waxaan jeclahay shiilan Faransiiska iyo haddii ay saliid la'aan yihiin, ka sii fiican.
11 / 08 / 2020 at 18: 06
Hello! Faallada waa in ay raacdaa tilmaamaha, halkan maaha. Farxad
29 / 08 / 2020 at 16: 14
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qof kale uu haysto waxa igu dhaca. Waxaan iibsaday kii ugu wacnaa 2020 oo dhammaan cuntooyinka dhadhamiyaan qariib, sida miridhku ama biraha ... Ma garanayo inay caadi tahay nooca karinta, laakiin kiiska hake ee dhadhanka ayaa aad u xoog badan oo waxay leeyihiin. ma ku faraxsan yihiin in la cuno, mise waxaa sabab u ah cilad mishiinka?
22 / 09 / 2020 at 16: 15
Waan kugu raacsanahay, marka lagu daro, waa wax aan suurtagal ahayn in la bunni karo.
03 / 10 / 2020 at 23: 55
In qolof qolof ah wax walba waa dhadhan. Aad ayaan u faraxsanahay oo waxaan u isticmaalaa wax walba, hilibka, kalluunka, khudaarta, baradhada.
Cilada kaliya ee aan arko waa in haddii aad samayso hilib rooti ah, hoosta kuma sii jiri doonto, markaad u rogto bunni, baytarigu wuxuu ku sii dhegan yahay rafka, xitaa haddii si fiican loo subkay.
Ma kugu dhacday? Sidee ku xalin kartaa?
31 / 07 / 2021 at 12: 22
Hi, inta badan waxaan qaataa xoogaa warqad dubista ah, qoyso oo iska daadi oo dhigaa gunta dambiisha, si aysan ugu dhegin oo mar walba waxaan haystaa dambiisha nadiif ah
05 / 09 / 2021 at 14: 07
Hello, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan sidoo kale samayn karo keega
18 / 01 / 2022 at 22: 28
Fiid wanaagsan, waxaan soo iibsaday foornada Lidl iyo ceeryaamo dhalada ah. Tani ma ku dhacdaa qof kale.
Haddii kale baradhada dambiisha ku jira waa qumman yihiin
21 / 01 / 2022 at 20: 51
Salaan, waxaan soo iibsaday lidl Silvercrest 9-in-1 hawo shiilan oo mar kale soo baxday, laakiin waxaan arkaa in albaabku uu yara dabacsan yahay oo mararka qaarkood ma wado marka la xidho. Ma iska caadibaa mise waxaa laga yaabaa inay cillad leedahay. Waan ka mahadcelin lahaa jawaab kasta. Mahadsanid horay.
27 / 01 / 2022 at 08: 19
Hadda waxaan iibsaday 9-kii 1-kii, muraayaddiina way kor u kacday...
Waxaan isticmaalay 3 jeer. Waan akhriyay in la isticmaalay kadibna la waayay, laakiin tani maahan kiiskayga. Ma baxayso. Ceeryaanku wuu sii kordhayaa.
29 / 01 / 2022 at 07: 51
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii albaabka u dhexeeya 2da muraayadood uu ceeryaamo ku jiro, taasoo ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn in la nadiifiyo, ama haddii ay dhibaato ku tahay shiilashayda. Wacan oo dhan